အသတ်ခံရလို့ သေတဲ့သူ ဝင်ပူးပြီး အလောင်းရှိတဲ့နေရာကို ညွှန်ပြပေး – WunYan
အသတ်ခံရလို့ သေတဲ့သူ ဝင်ပူးပြီး အလောင်းရှိတဲ့နေရာကို ညွှန်ပြပေး
whuk-46651 | September 5, 2017 | Crime News | No Comments
မြန်မာအချင်းချင်းသတ်ဖြတ်ပြီး ရေကန်ထဲပစ်ချထားသော အလောင်းပြန်ဆယ်ရလာပါပြီ …. 4-9-2017 ည ၁၀ နာရီခွဲ တွင် အလောင်းဆယ်ယူခဲ့သည်။
ထိုင်းနိင်ငံ ပြည်ပတိုင်းတပါးတွင် မြန်မာအချင်ချင်း မာဖီးယားဆန်ဆန် အခန်းမှန်အား ရိုတ်ခွဲ၍ လက်ပြန် ကြိုးတုတ်ခေါ် သွားပြီး လူများစုဖြင့် လင်မယားနှစ်ဦး အား ဓါးဖြင့်ဝိုင်းထိုးပြီး သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည့် မှု့ခင်း ဖြစ်ရပ်တစ်ခု မနေ့ညပိုင်းက ထိုင်းနိင်ငံ စာမွတ်ပါကန် မြို့နယ် တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
စမာဖော်န်၊ စွယ်ထန (10)၊ ရတနချွတ် (12)၊ ၅ ထပ်တိုက်၊ ဘန်ဖီ၊ စမွတ်ပရာကန်တွင် နေထိုင်သူ ကိုသက်ကိုကို (အ သက်) 22 နှစ် နှင့်ဇနီး မမြမြစန်း ပဲခူးတိုင်း၊ သနပ္ပင်မြို့နယ်၊ ကသည်းကုန်းရွာ ဇာတိတို့ကို တစ်ရွာထဲသား မောင်ဘိုဘို (ခ) မောင်ကိုကို နှင့် အပေါင်းအပါ (၅) ဦးတို့သည် (1.9.2017) ည ၁၂ နာရီခန့်အချိန်တွင် ၄င်းတို့ နေထိုင်ရာ ၅ ထ ပ်တိုက် အခန်း တံခါးမှန်များကို ဒုတ် ဓားများဖြင့် အတင်းရိုက်ဖျက် ဖွင့်ပြီး အခန်းထဲသို့ ၀င်ရောက်ကာ လင်မယား နှစ်ေ ယာက်စလုံးကို ကြိုးတုတ်ဖမ်းဆီးပြီး အနီးရှိ ဘောလုံးကွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်၍ အလုပ်ရုံ အုတ်တံတို င်းကျော်ကာ တံတို င်းဘေး ရေကန်နားတွင် ဒုတ်များ ဓားများဖြင့် ထိုးခုတ် သတ်ဖြတ်ပြီး ရေကန်ထဲသို့ ပစ်ချခဲ့ကြပါသည်။
ဇနီးဖြစ်သူ မမြမြစန်းကိုလည်း သတ်ဖြတ်ရန် အားထုတ်စဉ်တွင် ကံကောင်းထောက်မစွာ ရေကန်ထဲ ခုန်ဆင်းလွတ်မြော က်သွားခဲ့ပါသည်။
သက်ကိုကိုအား သယ်ယူသွားသည်ကို ဇနီးဖြစ်သူမှ မြင်နေရသော်လည်း အားမသန် မာန်လျှော့ကာ ရေကန်စပ် ကျူ ပင် များကြားမှသာ ပုန်းအောင်းရင်း တွေ့မြင်ရသည်မို့ သေသည် ရှင်သည် မသိရသေးပါ။ သေသွားသည်ရှိသော် အလောင်း ဘယ်နား ပစ်ချထားသည်ကိုလည်း မသိရသေးပါ။
လူသတ်မှု ကျူးလွန်သူများသည် သေဆုံးသူ၏ ဘက်အိတ်များ ပတ်စပို့စာအုပ်များကိုလည်း ယူဆောင်သွားကြသည်ဟု သိရသည်။
ယခုအခါတွင် အမှုမှန် ပေါ်ပေါက်ပြီး တရားခံများကို အမြန်ဆုံး ဖမ်းဆီးနိုင်ရန် AAC အဖွဲ့မှ အကြောင်းကြားပြီး သက်ဆို င်ရာ ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်နိုင်ရန် ကြိုးစားခဲ့ပါသော်လည်း အသိစောပေမယ့် လှုပ်ရှားမှု နောက်ကျသွားခဲ့လို့ ပြစ်မှု ကျူးလွန် သူများမှ ထဲမှ အဓိကစေခိုင်းသူတစ်ဦးကိုသာ ဖမ်းမိပြီး ကျန်သူ များမှာ မနက်ခင်းပိုင်း အလုပ်ဆင်းကာ နေ့ခင်းပိုင်းတွင် ထွက်ပြေးသွားကြပါသည်။ ဖမ်းဆီးမိထားသူ မြန်မာတစ်ဦးကလည်း အလောင်း အား ဘယ်မှာ ပစ်ထားသလဲ ဆိုတာ ထု တ်ဖော်ပြော ဆိုခြင်း မရှိပါ။
သက်ကိုကို၏ အလောင်းကိုလည်း ဘန်ဖီ ပလိပ်များ နှင့်အတူ AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့မှ ရှာဖွေနေကြသော်လည်း ယခုချိန်ထိ ရှာမတွေ့သေးပေ။
အသတျခံရလို့ သတေဲ့သူ ဝငျပူးပွီး အလောငျးရှိတဲ့နရောကို ညှနျပွပေး
မွနျမာအခငျြးခငျြးသတျဖွတျပွီး ရကေနျထဲပဈခထြားသော အလောငျးပွနျဆယျရလာပါပွီ …. 4-9-2017 ည ၁၀ နာရီခှဲ တှငျ အလောငျးဆယျယူခဲ့သညျ။
ထိုငျးနိငျငံ ပွညျပတိုငျးတပါးတှငျ မွနျမာအခငျြခငျြး မာဖီးယားဆနျဆနျ အခနျးမှနျအား ရိုတျခှဲ၍ လကျပွနျ ကွိုးတုတျချေါ သှားပွီး လူမြားစုဖွငျ့ လငျမယားနှဈဦး အား ဓါးဖွငျ့ဝိုငျးထိုးပွီး သတျဖွတျခဲ့ကွသညျ့ မှု့ခငျး ဖွဈရပျတဈခု မနညေ့ပိုငျးက ထိုငျးနိငျငံ စာမှတျပါကနျ မွို့နယျ တှငျ ဖွဈပှားခဲ့ပါသညျ။
စမာဖျောနျ၊ စှယျထန (10)၊ ရတနခြှတျ (12)၊ ၅ ထပျတိုကျ၊ ဘနျဖီ၊ စမှတျပရာကနျတှငျ နထေိုငျသူ ကိုသကျကိုကို (အ သကျ) 22 နှဈ နှငျ့ဇနီး မမွမွစနျး ပဲခူးတိုငျး၊ သနပ်ပငျမွို့နယျ၊ ကသညျးကုနျးရှာ ဇာတိတို့ကို တဈရှာထဲသား မောငျဘိုဘို (ခ) မောငျကိုကို နှငျ့ အပေါငျးအပါ (၅) ဦးတို့သညျ (1.9.2017) ည ၁၂ နာရီခနျ့အခြိနျတှငျ ၄ငျးတို့ နထေိုငျရာ ၅ ထ ပျတိုကျ အခနျး တံခါးမှနျမြားကို ဒုတျ ဓားမြားဖွငျ့ အတငျးရိုကျဖကျြ ဖှငျ့ပွီး အခနျးထဲသို့ ၀ငျရောကျကာ လငျမယား နှဈေ ယာကျစလုံးကို ကွိုးတုတျဖမျးဆီးပွီး အနီးရှိ ဘောလုံးကှငျးသို့ ချေါဆောငျ၍ အလုပျရုံ အုတျတံတို ငျးကြျောကာ တံတို ငျးဘေး ရကေနျနားတှငျ ဒုတျမြား ဓားမြားဖွငျ့ ထိုးခုတျ သတျဖွတျပွီး ရကေနျထဲသို့ ပဈခခြဲ့ကွပါသညျ။
ဇနီးဖွဈသူ မမွမွစနျးကိုလညျး သတျဖွတျရနျ အားထုတျစဉျတှငျ ကံကောငျးထောကျမစှာ ရကေနျထဲ ခုနျဆငျးလှတျမွော ကျသှားခဲ့ပါသညျ။
သကျကိုကိုအား သယျယူသှားသညျကို ဇနီးဖွဈသူမှ မွငျနရေသျောလညျး အားမသနျ မာနျလြှော့ကာ ရကေနျစပျ ကြူ ပငျ မြားကွားမှသာ ပုနျးအောငျးရငျး တှမွေ့ငျရသညျမို့ သသေညျ ရှငျသညျ မသိရသေးပါ။ သသှေားသညျရှိသျော အလောငျး ဘယျနား ပဈခထြားသညျကိုလညျး မသိရသေးပါ။
လူသတျမှု ကြူးလှနျသူမြားသညျ သဆေုံးသူ၏ ဘကျအိတျမြား ပတျစပို့စာအုပျမြားကိုလညျး ယူဆောငျသှားကွသညျဟု သိရသညျ။
ယခုအခါတှငျ အမှုမှနျ ပျေါပေါကျပွီး တရားခံမြားကို အမွနျဆုံး ဖမျးဆီးနိုငျရနျ AAC အဖှဲ့မှ အကွောငျးကွားပွီး သကျဆို ငျရာ ရဲစခနျးတှငျ အမှုဖှငျ့နိုငျရနျ ကွိုးစားခဲ့ပါသျောလညျး အသိစောပမေယျ့ လှုပျရှားမှု နောကျကသြှားခဲ့လို့ ပွဈမှု ကြူးလှနျ သူမြားမှ ထဲမှ အဓိကစခေိုငျးသူတဈဦးကိုသာ ဖမျးမိပွီး ကနျြသူ မြားမှာ မနကျခငျးပိုငျး အလုပျဆငျးကာ နခေ့ငျးပိုငျးတှငျ ထှကျပွေးသှားကွပါသညျ။ ဖမျးဆီးမိထားသူ မွနျမာတဈဦးကလညျး အလောငျး အား ဘယျမှာ ပဈထားသလဲ ဆိုတာ ထု တျဖျောပွော ဆိုခွငျး မရှိပါ။
သကျကိုကို၏ အလောငျးကိုလညျး ဘနျဖီ ပလိပျမြား နှငျ့အတူ AAC မဟာမိတျအဖှဲ့မှ ရှာဖှနေကွေသျောလညျး ယခုခြိနျထိ ရှာမတှသေ့ေးပေ။
ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်တွင် ငွေကျပ် ၃ဝ၁၃ ဒသမ ၅ သိန်းတန်ဖိုးရှိ အီသာအရည်နှင့် ကန့်များ ဖမ်းဆီးရမိ
မီးတားရန် မီးရှို့ရာမှ သမီးဖြစ်သူ မီးလောင် သေဆုံး